Ngaba Unengelosi Yakho?
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI IPidgin yaseSolomon Islands ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iban Isi-Ibanag Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBaoule IsiBashkir IsiBatak (SaseKaro) IsiBatak (SaseToba) IsiBengali IsiBhulu IsiBiak IsiBicol IsiBislama IsiBulgarian IsiCambodia IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitumbuka IsiChiyao IsiChokwe IsiChuvash IsiCibemba IsiCinyanja IsiCreole saseHaiti IsiCreole saseMauritius IsiCreole saseSeychelles IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiDrehu IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFon IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiGun IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHmong (White) IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiJavanese IsiKabiye IsiKazakh IsiKikamba IsiKikaonde IsiKikongo IsiKikuyu IsiKiluba IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKiribati IsiKirundi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKurdish Kurmanji (SaseCaucasus) IsiKurdish Kurmanji (sesiCyrillic) IsiKwangali IsiKwanyama IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLunda IsiLuo IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMam IsiMambwe-Lungu IsiMaya IsiMbunda IsiMizo IsiMoore IsiMyanmar IsiNahuatl (saseNorthern Puebla) IsiNdebele IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNdonga IsiNepali IsiNgangela IsiNgesi IsiNias IsiNiuea IsiNorway IsiNyaneka IsiNzema IsiOromo IsiOssetia IsiOtetela IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPonapea IsiQuechua (saseAncash) IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseBolivia) IsiQuechua (saseCuzco) IsiQuichua (SaseChimborazo) IsiQuichua (SaseImbabura) IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSesotho (South Africa) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTamil IsiTatar IsiTetun Dili IsiThai IsiTigrinya IsiTiv IsiTojolabal IsiTok Pisin IsiTongan IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUmbundu IsiUrhobo IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWayuunaiki IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZulu isi-Igbo isiWallisian
IBhayibhile ayifundisi ukuba umntu ngamnye unengelosi yakhe emkhuselayo. Yinyani ukuba uYesu wakhe wathi: “Qinisekisani ukuba anideleli namnye waba bancinane [abafundi bakaKristu], kuba ndithi kuni iingelosi zabo ezulwini zisoloko zibubona ubuso bukaBawo osezulwini.” (Mateyu 18:10) Kodwa ke, uYesu wayengathi umntu unengelosi yakhe, kodwa wayesithi iingelosi zinomdla kumntu ngamnye kubafundi bakhe. Ngoko abanquli bokwenyaniso abazifakI engozini kuba besithi iingelosi zikaThixo ziza kubakhusela.
Ngaba loo nto ithetha ukuba iingelosi azibancedi abantu? Hayi, ayithethi loo nto. (INdumiso 91:11) Abanye abantu bakholelwa ukuba uThixo uyabakhusela aze abakhokele esebenzisa iingelosi. Omnye waba bantu nguKenneth, ebekuthethwe ngaye kwinqaku lokuqala. Nangona singenakunyanzelisa izimvo zethu, kodwa kusenokwenzeka ukuba uchanile. AmaNgqina KaYehova asoloko elubona uncedo lweengelosi xa ekumsebenzi wokushumayela. Kodwa ke, ekubeni iingelosi zingabonakali, asinakuyazi ukuba uThixo uzisebenzisa njani okanye nini ukuze ancede umntu ngamnye. Into esiyaziyo kukuba, simele simbulele uSomandla ngazo zonke iindlela asinceda ngazo.​—Kolose 3:15; Yakobi 1:17, 18.
Ngobusuku bakhe bokugqibela emhlabeni uYesu wavela nendlela entsha yokusondela kuThixo.